ट्रम्पको भोजनमा सागपात मिसाइदिने को ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पूर्व निजी चिकित्सक डा. रोनी ज्याक्सनले अघिल्लो हप्ता एउटा रमाइलो खुलासा गरे । उनले ट्रम्पको तौल घटाउन उनका खानामा लुकाएर सागपात मिसाइदिने गरेका थिए । राष्ट्रपति निवास ह्वाइट हाउसमा डा. ज्याक्सनले व्यायामशाला पनि स्थापना गरेका थिए ।
ज्याक्सनले राष्ट्रपतिको ट्रम्पको भोजनमा सागपात मिसाइदिने गरेका थिए । आलु लगायतका परिकारमा ट्रम्पले थाहा नपाउने गरी काउली मिसाइदिने गरेको उनले ‘द न्युयोर्क टाइम्स’लाई बताए ।
रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका ज्याक्सनले ट्रम्पको भोजनमा सागपात मिसाइदिएर उनको वजन १५ किलो घटाइदिएको बताए । ‘शारीरिक अभ्यासमार्फत राष्ट्रपतिको तौल घटाउने मेरो योजनाले खासै काम गरेन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले उनको भोजनमा ध्यान दिन थाल्यौँ । उनलाई आइसक्रिम कम दिन थाल्यौँ भने आलुको परिकारमा काउली मिलाइदिन थाल्यौँ ।’
ट्रम्पको खानपान स्वभाव स्वास्थ्यकर छैन । उनी ह्यामबर्गरजस्ता जंक फुड धेरै खान्छन् । तर, ७३ वर्षको उमेरमा पनि उनी तन्दुरुस्त नै छन् । डा. ज्याक्सनका अनुसार कसैकसैको जिन नै बलियो हुन्छ । ‘यसलाई जिनेटिक्स भनिन्छ,’ उनले भने, ‘केही मानिसको जिन बलियो हुन्छ । ट्रम्प आफ्नो उमेरका सामान्य अमेरिकी नागरिकभन्दा ज्यादा स्वस्थ छन् ।’ उनले ट्रम्प धेरै बाँच्ने पनि दाबी गरे । ठट्यौली शैलीमा भने, ‘अबको २० वर्ष ट्रम्पले स्वास्थ्यकर भोजन गर्ने हो भने उनी दुई सय वर्ष बाँच्न सक्छन् ।’ हाल ट्रम्प कोलेस्टेरोल घटाउने औषधि खाइरहेका छन् । तालु खुइलिने समस्याका कारण उनी दिनहुँ एन्टी–बाल्डनेस पिल पनि सेवन गरिरहेका छन् ।